true children /zu-ZA/tools-for-life/children/steps/how-to-live-with-children.html quiz 4 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/children_zu_ZA.jpg Izingane
Iqiniso ngukuthi ayikho ingane eyake yonakaliswa uthando, uzwelo, umusa, ukuqonda noma ngisho nangokuzitika (ukumnika kakhulu). Unganikeza ingane yakho imoto, isithuthuthu noma yini enye owawuyifuna nawe usayingane, futhi ingane yakho ngeke itotoseke. Ungamnika amathoyizi angcono kunanoma yimuphi omunye umuntu osebhlokeni anawo futhi ngeke umenzele islobho (umuntu obukela phansi abanye) kuye. 0
Iqiniso ngukuthi ayikho ingane eyake yonakaliswa uthando, uzwelo, umusa, ukuqonda noma ngisho nangokuzitika (ukumnika kakhulu). Unganikeza ingane yakho imoto, isithuthuthu noma yini enye owawuyifuna nawe usayingane, futhi nengane yakho ngeke itotoseke. Ungamnika amathoyizi angcono kunanoma yimuphi omunye umuntu osebhlokeni anawo futhi ngeke umenzele islobho (umuntu obukela phansi abanye) kuye.
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana “Ukutotosa” Ingane Ngothando noKuthambakela bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.